Akhriso Dareenka Qiirada Leh Ee Sergio Ramos Kaddib Markii Loo Xaqiijiyey In Uu Seegayo Kulamada Liverpool & Barcelona - Laacib
HomeWararka Champions LeagueAkhriso Dareenka Qiirada Leh Ee Sergio Ramos Kaddib Markii Loo Xaqiijiyey In Uu Seegayo Kulamada Liverpool & Barcelona
Akhriso Dareenka Qiirada Leh Ee Sergio Ramos Kaddib Markii Loo Xaqiijiyey In Uu Seegayo Kulamada Liverpool & Barcelona
April 1, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 1
Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa seegi doona labada ciyaarood ee Champions League ee wareegga siddeedda ee Liverpool, kaddib dhaawac kasoo gaadhay muruqa.
35 jirkan ayay kooxdiisu xaqiijisay in baadhitaano ay ku samaysay ay muujiyeen in uu dhaawac kasoo gaadhay muruqa laba afar daqiiqadood oo uu dheelay ciyaartii xulka Spain ku garaacay Kosovo, waxaase uu xanuunka dareemay markii ay ciyaartu dhamaatay oo uu garoonka dhexdiisa tababar kusii samaynayay.
Real Madrid ayaa Salaasada 6 April la ciyaaraysa Liverpool lugta hore ee tartanka Champions League halka lugta labaadna ay tahay toddobaadka xiga ee 14 April, hase yeeshee labadan ciyaarood ayay u dhaxaynaysaa ciyaarta kale ee adag ee El Clasico oo ay Barcelona kusoo dhoweyn doonaan garoonka Santiago Bernabeu.
Sergio Ramos ayay xaqiiqo tahay in saddexdan ciyaarood iyo kulanka kasoo horreeya ee Eibar ee Sabtida uu seegi doono.
Kaddib markii loo xaqiijiyey in aanu ciyaari doonin, Sergio Ramos ayaa dareenkiisa kusoo bandhigay bartiisa bulshada ee Instagram, waxaanu yidhi: “Haddii ay jirto arrin i dhaawacaysa, waa in aanan caawin karaynin kooxdayda kulamadan aadka u adag.”
Ramos ayaa kulamada Liverpool ay u leeyihiin dareen iyo xamaasad ka badan ciyaaraha kale sababtoo ah waxa la xasuusan yahay dhacdadii finalkii Champions League ee Kiev, markaas oo uu garabka ka jabiyey xiddiga Liverpool ee Mohamed Salah.
Ciyaartii iskugu dambaysay Real Madrid iyo Liverpool oo ahayd finalkii Champions League, Los Blancos ayaa koobka ku qaadday 3-1 laakiin natiijada ciyaartaas waxa garab socotay hadal hayn badan oo ahayd qaabkii uu Ramos dhaawaca ugu geystay Salah.
Si kastaba, Mohamed Salah iyo Sergio Ramos ayaan markan iska hor iman doonin, waxaana dusha sare ciyaarahan ka daawan doona Ramos oo ay booskiisa buuxin doonaan Nacho iyo Raphael Varane haddii ay taam ahaadaan.
Izka maqnow wax mataré ahydee😂😂